Nat – Taylor Lopes ツ Blog
kọmputa & ozi Technology
Configuring DDNS bugharia via modem + rawụta
Echefu No-IP na DynDNS! Mee ka gị na rawụta na-arụ ọrụ na akwa mode na hazi DDNS na DNS-O-Matic.
28 January 2017 Taylor Lopes	egwu, Asus, akwa, ddns, dns-o-matic, dnsomatic, dyndns, freedns, modem, Nat, ọ dịghị-ip, rawụta, technicolor	Nkume a comment
tụlere ihe iseokwu
Hazi GPS Tracker iji nweta map na Internet Ya mere, i kwesịrị iji soro ụgbọ ala gị n'elu Internet, -eso ụzọ, ezigbo oge ọsọ na ebe? Ma ọ bụ ma eleghị anya ga-ọzọ udo nke uche ebe ọ maara ebe onye na nke ezinụlọ unu? Ịlele a! Introdução Hoje e...
USB Device adịghị ghọtara – ngwa nbipute [kpebiri] Ọ bụ uru na ihe ndekọ! M na-ekwu nke a n'ihi na taa abụọ multifunction na-ebi akwụkwọ ndị HP na otu nsogbu: "USB Device adịghị ghọtara". doro anya, ngwọta ị chọta ebe a! Problema Cena do crime: Abụọ ebi akwụkwọ ...
-Agba ọsọ .bat script ke ndabere [kpebiri] Days gara aga m mkpa ụfọdụ Windows igwe na m na netwọk efehe a .bat script na ndabere (-enweghị onye ọrụ noticing). Ọ bụrụ na nke a bụ ihe dị gị mkpa, aga n'ihu!	Introdução Batch ou arquivo de lote (kwa m zutere ...
Naghachi MySQL tebụl mgbe naanị .frm na .ibd faịlụ dị Otú e si edozi "MySQL Error #1146 - Isiokwu adịghị adị" mere site na-akpụ akpụ faịlụ .idb (InnoDB) ozugbo n'etiti directories (tablespace). Problema Muitos dos problema que temos são problemas que criamos. M ga-eme ka otu ...
IFRAME com 100% ka idi-elu-akpaghị aka Ụfọdụ omume ngwọta gị IFRAME kpatụ elu dynamically ka ọdịnaya egosipụta. Problema Deixar um IFRAME com altura automática, dị ka e gosiri ọdịnaya, Ọ pụrụ ịbụ ihe dị mfe ime, ma oge ...
Taylor Lopes, kwuru: Ọ na-adịghị ihe ọ bụla igbochi geoplugin. Gbalịa na-agba ọsọ Linux nchọgharị ihe dị ka http://www.geoplugin.net/php.gp?ip = 177.201.51.211 (n'ọnọdụ ya nti IP na Internet, nke a pụrụ inweta na meuip.com.br).
Taylor Lopes, kwuru: hello Carlos, M na-ekele comment. dị ka m kwuru, ụfọdụ kam 8 ọnwa, ma ọ gaara obere. Bụ na chọrọ ijide n'aka na m dị njikere ghara ida ego. Ọ bụrụ na ị chọrọ a shortcut, ka simulated (ọtụtụ!!). Ma m nwere ike ikwu na-agụ akwụkwọ ...
Thiago, kwuru: Ebe a na-akụkụ dịkwuo anụ ahụ ọrụ HD, kwalite asụsụ ọma na igbe n'ụzọ ziri ezi na-egosi na họrọ size, ma mgbe m na-abanye VM HD na-aga n'ihu na ochie size… Ọbụna GParted adịghị egosi ọhụrụ size dị ka a mapụtara ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Thiago, kwuru: Na-etinye ụzọ na abụọ ruturu na doziri
Guilherme Cruz, kwuru: Mr. Lopes, Ị maghị otú ihe ndụ m ugbu a facilitaste. ekele gị nke ukwuu!
Carlos, kwuru: Ekele na ebe-enweta asambodo! Ogologo oge ọ were site na mmalite nke ọmụmụ site agafe udomo oro ? ị na-eche 3 ọnwa(amụ 30 àgwà nke 1 awa ụbọchị, 7 ụbọchị n'izu) Ha na-ezu iji nweta asambodo ? Suces ...
Geovane, kwuru: Na m Windows igwe efehe ejikari. Eme na ogologo-igosipụta data. Ma mgbe m na Linux openSUSE ọ na-adịghị n'ịwa. Ị chọrọ ime ụfọdụ ndị ọzọ nhazi?
cadu Reff, kwuru: Putz.. 7 dpois afọ na ị ka na-azọpụta gent… Mto ekele, zọpụta m!!!
km, kwuru: ekele gị nke ukwuu! kpebiri!
Taylor Lopes, kwuru: Opa, Ọ bụ na PHP7 na-agaghịkwa na-atụ aro iji klas aha dị ka a na-ewu, mgbe ahụ faịlụ class.ipdetails.php (akara 27) ezuru: # Substituir ọha na eze ọrụ ipdetails($IPADDRESS) # por ọha na eze ọrụ __construct($ipadd ...
Nganga nọgidere na-enwe site na WordPress | isiokwu: sorbet site WordPress.com.
Copyright © 2018 taylorlopes.com ebe Oct 2012, 1.658.117 ohere | ugbu a
"Na-agọzi m, me kwa ka ókè-ala, ọ bụ m aka gị na ihe ọjọ echebe - m ČR 4:9"